किन हुन्छ डिमेन्सिया अर्थात् बुढेसकालमा बिर्सने रोग? लक्षण र बच्ने उपाय के-के हुन्? :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
किन हुन्छ डिमेन्सिया अर्थात् बुढेसकालमा बिर्सने रोग? लक्षण र बच्ने उपाय के-के हुन्?
स्वास्थ्यखबर सोमबार, पुस ५, २०७८, १२:४७:१३
प्रश्न: किन हुन्छ डिमेन्सिया अर्थात् बुढेसकालमा बिर्सने रोग? लक्षण र बच्ने उपाय के-के हुन्?
डा कपिलदेव उपाध्यायको उत्तर : कुनै मानिसको उमेर ६० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ र बिर्सने बानी पनि बढ्दै गएको छ भने उसलाई ‘डिमेन्सिया’ नामक मानसिक रोग लागेको हुनसक्छ । यो रोग लागेपछि सम्झने, आफन्तजनलाई चिन्ने, उनीहरुको नाम सम्झने, सरसफाई, नुहाइधुवाई तथा दिसा–पिसाव गर्ने जस्ता पहिले गर्दै आएका महत्वपूर्ण काम गर्ने शक्ति क्षीण हुँदै जान्छ। यो रोग प्रायः ६० वर्ष उमेरपछि मात्र लाग्छ र जति उमेर वढ्दै गयो डिमेन्सिया हुने सम्भावना बढ्दै जान्छ। प्रायः ६५ देखि ७० वर्ष उमेरका मानिसमा डिमेन्सिया हुने सम्भावना करिब १ प्रतिशत हुन्छ भने ९०–९५ वर्षकालाई यो रोग हुने सम्भावना करिब १० प्रतिशत हुन्छ।
पैसा, गरगहना, साँचो वा कागजपत्रहरु राखेको ठाउँ प्रायजसो बिर्सिने र घन्टौं खोजी गर्नुपर्ने। (तर कहिलेकाहीँ बिर्सने जोकोहीलाई पनि हुन सक्छ, यसलाई रोग मानिँदैन।)